Mofo sy lalao: ampy ve izany? – Politika
Home Matoan-dahatsoratra Mofo sy lalao: ampy ve izany?
Madagasikara, volana jolay 2019: miasa amim-pilaminana, tsy misedra fahasarotana firy ny governemanta vaovao taorian’ny fifidianana filoham-pirenena, manatanteraka sahady ny asa voasoratra ao anatin’ny drafitrasa ho fisandratan’ny firenena. Nazava ny voka-pifidianana solombavambahoaka, vitsy dia vitsy ny tsy fahatomombanana tamin’izany. Enim-bolana taorian’ny fisian’ny fahabangan’ny solombavambahoaka dia miverina mandray ny asany indray ny Antenimierampirenena. Maka ny toerana ihany koa ny mpanohitra ary mijoro ho ‘mpanangana fa tsy mpandrava’. Nanome hasina ny renivohitra ny fitsidihana nataon’ny delegasiona avo lenta avy any Rwanda. Niteraka hafaliana tsy misy toa azy ny Barea, hafaliana izay niraisan’ny firenena iray manontolo, ary inoana fa ny fitsidihan’ny papa ray masina amin’ny volana septambra ihany no mety afaka hitondra hafaliana tahaka izany. Azo heverina hoe manjopy maitso na volomboasary avokoa ny jiro eto Madagasikara. Ilaina tokoa ny manararaotra ny fahavitrihana nateraky ny fitsidihana ara-pomba ofisialy nataona filoham-panjakana izay mpanangana kalaza mampiaiky manerana an’i Afrika iray manontolo, ary ny manararaotra ny fandresena nifanesisesy azon’ny ekipam-pirenena teo amin’ny sehatra fifaninanana ara-panatanjahantena iraisan’i Afrika; i Angela Merkel sy i Emmanuel Macron koa mba nanao tahaka izany. Tsaroatsika tsara angamba ny sarin’i Angela Merkel tao amin’ny efitrano fisoloana akanjo an’ny ekipam-pirenena alemà fony izy ireo nandrombaka ny amboara eran-tany teo amin’ny lalao baolina kitra tamin’ny taona 2014 tany Rio de Janeiro. Maro tokoa ankehitriny ireo governemanta izay miezaka mifehy amin’ny fomba lavorary ny toe-pon’ny olom-pirenena mba ahazoan’izy ireo manararaotra izany: ‘mofo sy lalao’ (panem et circenses), tsy miova ny haivarotra ara-politika efa nisy nandritra izay 2000 taona izay. Mety ho manintona antsika sy mifindra amintsika mihitsy aza ny fahombiazana azon’ny hafa. Maneho amintsika ny hakelin’ny zava-bitantsika anefa izany. Fotoana fohy ihany matetika no ahazoatsika mampanadino ny olona amin’ny alalan’ny hafaliana sy firavoravoana ireo asa goavana izay mbola miandry, toy ny fahambanian’ny taha-pamokarana, ny fiankinandoha ara-toekarena, ny faharefon’ny fahamarinan-toeran’ny vola, ny fahambanian’ny lenta-pahavononana hanova zavatra, ny fanjavonan’ny sokajin’ny mponina tafavoaka ny haron’ny valalabemandry, ny fahantrana izay nahazo faka lalina dia lalina, ny fitontongan’ny fanabeazana, na koa ny tsy fisiana ligim-pirenena ho an’ny seha-daolaon’ny baolina kitra matihanina. Santionany ihany ireo, maro no mbola azo tanisaina. Mankalaza ny zava-bita mampitolagaga nataon’ny Barea isika, rariny dia rariny tokoa izany. Aoka anefa tsy ho hadinoitsika fa i Madagasikara anie ka tsy mbola mahavita mamokatra pensilihazo. Mampalahelo fa maro ireo olom-pirenena izay mbola voarebirebin’ny sinema ara-politika. Efa ela no nifandraisako tamin’i Madagasikara sy ny mponina ao aminy, tsy anisan’ireo vazaha mpandalo fotsiny ihany aho. Niainako mivantana ny fomba namahan’ny firenena afrikanina hafa ny olana ara-drafitra sedrain’izy ireo. Namaritra drafi-mpampandrosoam-pirenena hanatràrana vina ho an’ny 25 hatramin’ny 30 taona manaraka i Rwanda sy Etiopia. Azo atao tsara ny maka lesona amin’izany: tsy mionona amin’ny fananganana drafi-mpampandrosoana ho an’ny dimy taona fotsiny ihany, izay matetika aza mbola asiam-mpanovana rehefa misy ny fiovan’ny governemanta. Any amin’ny firenena miteny frantsay dia ny firafitry ny komity mpitantana no andaniam-potoana iadian-kevitra, toa tsy misy mametra-panontaniana hoe mety mitondra fivoarana mivaingana eo amin’ny lafiny politika ve izany na tsia. Tokony ho toheritsika rehetra izany. Mila filaminana sy fahamarinan-toerana ny tena fampandrosoana marina. Maniry koa aho raha maniry ny hahatongavan’i Madagasikara amin’izany ao anatin’ny roa taona manaraka. Fantatsika koa anefa fa ny politika, raha tiatsika ny hisian’ny fivoarana, dia tsy azo sarahina fa mifanindran-dalana hatrany amin’ny fahavitrihana sy ny fisehoan-javatra tsara fanararaotra. Mijanona ho zava-dehibe hatrany ny fifampidinihana amin’ireo tsy mitovy hevitra amin’ny tena, izany hoe amin’ny mpanohitra sy ny firaisamonim-pirenena. Lalana iray ahazoana misorona ny afo politika mba hifanaraka amin’ny maripàna tsy mampipoaka ny sarom-bilany izany, ary indrindra ahazoana mitondra an’i Madagasikara mankany amin’ny tena fivoarana.
Constatin Grund, représentant résident an’ny FES eto Madagasikara
Asa fampandrosoana, Matoan-dahatsoratra, Pôlitika
Previous ArticleSolika : tsy manaiky i Andry RajoelinaNext ArticleTafatafa tamin’i CHRISTINE RAZANAMAHASOA